Oilbayer no Integrated-teknolojia avo orinasa manokana amin'ny fampandrosoana ny fikarohana, famokarana sy ny varotra ao amin'ny tsenan'ny asa oilfield simika. Tsy manana orinasa mpamokatra entana roa zavamaniry hita ao amin'ny Lingang Chemical Industry Zone in Cangzhou, Hebei faritany sy Tianjin Binhai High-teknolojia Zone aiza ny 12km miala Tianjin International Airport ary 22km avy any Port Tianjin.
Oilbayer no mitarika oilfield simika mpanome tolotra amin'izao tontolo izao ny ambony-notch laboratoara, ekipa matihanina fikarohana sy ny mandroso indrindra mafy sy ny ranon-javatra mandeha ho azy pamokarana ao Shina. Afaka manome vahaolana azo antoka ara-teknika sy ny Tailor-nanao vokatra ho an'ny mpanjifa. Miezaka isika ny manome fampisehoana milamina sy azo antoka tsara ny vokatra ho an'ny customers.At ankehitriny, dia manana zo tsy miankina fananana ara-tsaina, toy ny ranon cementing fatiantoka additives, retarders, dispersants; -monina ary atsofony menaka ranoka, inhibitors, Anti-sloughing sy fibahanana mpandraharaha tonga dia mandefa radio, sns fahavitan'ny tsiranoka, 30 mahery entana samy hafa ao amin'ny andian-dahatsoratra voalaza etsy ambony 7.
Ankoatra izany, dia foana ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny oilfield orinasa avy any Iran, Arabia Saodita, Meksika, Indonezia, Venezuela, Kanada, Aostralia, Syria sns Ilaina ny manondro fa efa nahazo mari-pahaizana avo dia avo ny fanombanana azy anisan'izany NIDC , PDVSA, ONGC, BELORUSNEFT, PERTAMINA sy PEMEX sns
Nahatsiaro ny Oilbayer teny filamatra, "ho Amazing Ela!", Ny fahitana dia mba ho mpitarika eo anivon'ny tontolo izao ny oilfield simika fanompoana orinasa, dia manolo-tena mba hanome soa aman-tsara, ny tontolo iainana namana, voalohany-kilasy, avo-fahombiazany sy ny Sarobidy tolotra ho an'ny ao an-toerana ary ny iraisam-pirenena ny mpanjifa. Oilbayer unrelentingly miezaka hanome fandresena-fandreseny tranga ho an'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa.